Equalizer music player booster အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
2.23.00 for Android
4.5 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（12.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Equalizer music player booster
တောက်ပသော HD Sound အရည်အသွေးကိုကမ်းလှမ်းသော Android အတွက်တန်းတူညီမျှမှုနှင့်ဘေ့စ်ပါ0င်သောအကောင်းဆုံး all-in-one Music Player Player, Bass Booster ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
အရည်အသွေး - ကင်းစင်ခြင်း, အခမဲ့နှင့်လွယ်ကူခြင်း, သင့်အတွက်ထူးခြားသောဂီတအချိန်များကိုခံစားရန်အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်လှပပြီးဖော်ရွေသော interface ။
Mix, Mix, Edit, ပြင်ဆင်ခြင်း, ပြင်ဆင်ခြင်း, သင်၏အသံအတွေ့အကြုံကိုထိန်းချုပ်ပါ *
- အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို အခြေခံ. PRO အသံကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ - acoustic, classical, dance, Electro, Flat, Hip-hop, Jazz, Jazz, Pop, Pop, R & B, R & B နှင့် ROCK
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထုံးတမ်းစဉ်လာများ - အစွမ်းထက်သောဘေ့စ်ပမာဏ Booster: Booster level control နှင့်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် - Visualizers: Visualizers: Visuals နှင့်အတူ။ DJ Mode (Fade): DJ Mode (Fade): DJ Mode (Fade) - Queue System: Queue System: appbr> - Queue System ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ အခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစဉ်သင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကိုနားထောင်ပါ - 3-status'rapeating 'function: playslist ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်ချက် - တေးဂီတတိုးတက်လာခြင်း ဘား - မင်းရဲ့အသံထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူသိရှိနိုင်တဲ့အတွက်
ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ BR> - app မှ Playlists များကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးပါ။ - လတ်တလောလမ်းကြောင်းများ, သီချင်းများ, အနုပညာရှင်များ, အယ်လ်ဘမ်များ, အယ်လ်ဘမ်များ, အမျိုးအစားများနှင့်ဖွင့်စရာစာရင်းများ - သီချင်းများ, သို့မဟုတ်ဖွင့်စရာစာရင်းများ
Presets နှင့် / သို့မဟုတ်ကစားသမားထိန်းချုပ်မှု
Sleep Mode: သင်၏ timer ကိုသတ်မှတ်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလမ်းကြောင်းများရှာဖွေခြင်းကိုကြည့်ပါ။ မင်းအတွက်သူတို့အတွက်သူတို့
ကွန်ရက်မြင်နိုင်ချက် - activated လုပ်တဲ့အခါ WiFi ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အသုံးပြုသူများသည်တစ် ဦး ချင်းစီသည်အခြားဂီတစာကြည့်တိုက်ကိုတန်းတူပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်သူမျှမဒေါင်းလုပ်လုပ်စရာမလိုပါ,
Cover Arts option: လိုအပ်ပါကသင်၏လမ်းကြောင်းအတွက်အဖုံးများအတွက်အဖုံးများအတွက်အဖုံးများရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် - သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလမ်းကြောင်းများအားလုံးကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများထံတိုက်ရိုက်ဝေမျှရန်ဖြစ်နိုင်ချေ - သဟဇာတ Android TV, Android Auto
- အင်္ဂါရပ်အားလုံးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော Inapp0ယ်ယူမှုတစ်ခုတည်းသော INAPP0ယ်ယူမှုသည်ကြော်ငြာနံပါတ်မဟုတ်ပါ, ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အပတ်တိုင်းအံ့သြဖွယ်အထူးလျှော့စျေးများကိုရရှိနိုင်သည့်အထူးလျှော့စျေးများကိုရနိုင်သည်။
- Facebook: Facebook: https://www.facebook.com/equalizeBook.com/equalizepplus/
မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါသလား။ တစ် ဦး ကအကြံပြုချက်? တစ်ခုခုနှင့်အတူအကူအညီလိုအပ်? [email protected] မှာငါတို့အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ :)
ဘာအသစ်လဲ Equalizer music player booster 2.23.00
101% DOLBY DIGITAL 3D MUSIC PLAYER FOR ANDROID| EQUALIZER MUSIC PLAYER BOOSTER HINDI | MKTechnical
BEST AUDIO BOOSTER FOR ANDROID IN 2021⚡ Install Viper4Android + Dolby Atmos in Any Android Devices
Equalizer Music Player Booster (by MWM) - audio player for Android.
Top5Best Music Players | Equalizer Band | Bass Booster | 3D | Dolby Atmos Player
Equalizer music player booster 2.22.00
Equalizer music player booster 2.21.00
တေးဂီတညီမျှခြင်း & ဘေ့စ booster
Music player - equalizer - audio mp3 player
Thar Lin th0931743432l
Zin Min Min